Codashop Global Series: (၁)နှစ်မှသည် ပိုမိုကြီးမားလာပါပြီ! | Codashop Blog MM
Codashop Global Series: (၁)နှစ်မှသည် ပိုမိုကြီးမားလာပါပြီ!
Codashop ရဲ့ Community esports tournament ဖြစ်တဲ့ Codashop Global Series (သို့) CGS က ဒီ August လမှာ တစ်နှစ်ပြည့်လို့ ချန်ပီယံတွေဖို့ Challenge တွေရှိပါတယ်။ သင်ရဲ့ လက်စွမ်းတွေကို အသုံးချဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ကို​ ရောက်ရှိလာပါပြီ။ CGS ကို နိုင်ငံများစွာမှာ တိုးချဲကျင်းပခဲ့ပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကစားသမားများကို ကိုစုပေါင်းပြီး ဘယ်သူက အတော်ဆုံးလဲဆိုတာကို ပြသခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကဲ ယခုမှာတော့ တစ်နှစ်တာမှာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ နဲ့ အမှတ်တရတွေကို ပြန်လည်ကြည့်ရှု့လိုက်ရအောင်နော်။
Condashop ရဲ့ လစဥ် ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေကို ပိုမို လူသိများလာပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မတ်ဆီကို၊ ဘာရာဇီးနိုင်ငံ ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံ က အရမ်းတော်ကြတဲ့ Esports စတားတွေက ထောင့်ပေါင်းများစွာကနေ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်မှာ အရမ်းအားတတ်သရောရှိတဲ့ ကစားသမားပေါင်း ၇၀၀၀၀ ကျော်ကို ကျွန်တော်တို့ ကူညီခဲ့ပါတယ်။ Mobile Legends ၊ PUBG Mobile ၊ Call of Duty: Mobile ၊ VALORANT တို့မှာ သူတို့ရဲ့ပွဲတွေက Live Stream တွေနဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းတွေက လူမှုမီဒီယာတွေမှာ လူပေါင်း သန်း ၃၀ အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး လူတိုင်းအပြောများတဲ့ ခေါင်းစဥ်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
နိုင်ငံအသီးသီးမှ ထိပ်တန်း Influencer တွေက CGS ကို လူသိများအောင် သူတို့ရဲ့ နာမည်ကြီးမှုတွေကို အသုံးချပြီး CGS ကို ကြေငြာပေးကြပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ပရိသတ်တွေက Nexplay EVOS trio of H2WO ၊ Renejay နဲ့ Yawi တို့ရဲ့ အမေးအဖြေ Session တွေကို ကြည့်ရတာ ကြိုက်ကြပါတယ်။ TikTok မှာ Madam P နဲ့ အင်တာဗျူးက ၁.၂ မီလီယံ ကြည့်ရှု့သူတွေထိ​ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာ Enoxide Gaming (749K YT subs) ၊ Titanium Gamer (2.99M YT subs) နဲ့ Pro Nation (1.68M YT subs) တို့ အားလုံးက သူတို့အပိုင်းနဲ့ သူတို့ Codashop ကို သူတို့ Streams တွေထဲမှာ ထည့်သွင်းကြေငြာပေးသွားကြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက အကျော်ကြားဆုံး VALORANT ကစားသမားတွေထဲက Viperdemon ဆိုသူကတော့ သူ့ရဲ့ Twitch Watch Party ကနေ CGS ကြေငြာပေးသွားပါတယ်။ သူတို့က Event ကို ပိုပျော်စေဖို့ BOOMBURAPA ကိုပါထည့်သွင်း ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း Streamer ဖြစ်တဲ့ Team Bosskurr အဖွဲ့ဝင် Soloz က CGS နဲ့ Codashop ကို သူ့ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ကြေငြာပေးသွားပါတယ်။ Soloz က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Ford Mustang ကို ခြေညှပ်ဖိနပ်နဲ့ ၀ယ်တယ်ဆိုတာနဲ့ မလေးရှားက ပရိသတ်တွေက သူ့ကို သိကြပါတယ်။
Codashop Global Series က ဒေသအသီးသီးက ကစားသူများကို ကမ္ဘာကြီးကို သူတို့ရဲ့ ဇာတ်ခုံအဖြစ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ် ။ ပျော်ရွှင်မှု နဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေအပြင် CGS က ပိုမိုမှတ်မိစေတဲ့ အတွေအကြုံတွေနဲ့ မမျှော်မှန်းနိုင်သော နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်လမ်းများကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
လာအိုနိုင်ငံက CGS အတွေ့အကြုံကို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲကို ၁၂ ရာသီကြာ ကျင်းပသည့် ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ၆ ကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ Nightmare Esport ကို CGS မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အဖြစ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ CGS – LA ကတော့ နည်းနည်းမှ ရပ်တန့်ဖို့ လမ်းမမြင်ပါဘူး။
လက်တင် အမေရိကမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Streamer​ ၊ Influencer နဲ့ KOL Yue Aish တို့က CGS Brazil အတွက် ဂိမ်းကစားခြင်းမှာ ခေတ်သစ်တစ်ခုကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ LGBTQI+ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ CGS က Yue Aish ရဲ့ ပါဝင်မှုက သူတို့ရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက မိန်းကလေးတွေကို esports ကစားဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Team Yue Aish က CGS MLBB ချန်ပီယံကို အကောင်းဆုံးအမှတ်တွေနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားကလည်း အမှတ်ရစရာပြိုင်ပွဲတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ Season4မှာ မိန်းကလေးအသင်းဖြစ်တဲ့ Echo Brielle ကို တွေ့လိုက်ရပြီး သူတို့ရဲ့ Battle Royale ကျွမ်းကျင်မှုကို ကြွားပြခဲ့ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းပြီး ယဉ်ကျေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို တိုက်ပွဲမှာ ပေါ့သေးသေးအထင်မခံရအောင် လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ CGS က West Bandits နဲ့ FF Soloco တို့လို အပျော်တမ်းအဖွဲ့တွေကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် esports အဖွဲ့အစည်းတွေက အသိအမှတ်ပြုခံရရန်အတွက် ခြေလှမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Codashop Global Series ကိုလည်း မက္ကဆီကိုမှာ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး Season ၂ ခုလုံးမှာ Los del OXXO အဖွဲ့ကကြီးစိုးခဲ့ပြီး သရဖူနှစ်ခုလုံးကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။ ပိုကောင်းတဲ့အချက်က နာမည်ကြီး Meme ထဲက ကလေးလေးရဲ့ ရယ်စရာမျက်နှာလေးတွေကို အခြေခံထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ လိုဂိုကြောင့် သူတို့အသင်းကို သူတို့အသိုင်းအဝိုင်းက ပိုချစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Meme ရဲ့ ကောင်းကျိုးတစ်ခုပေါ့နော်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ CGS က ကမ္ဘောဒီးယားမှာလဲ ကောင်းမွန်စွာ ကိုယ်စားပြုခဲ့ပြီး Season 11 အထိ ပြိုင်ပွဲတွေကို ပြင်းထန်စွာ ကျင်းပနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးရလဒ်ကတော့ ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ အဓိက MLBB pro ပြိုင်ပွဲကြီးများဖြစ်သော Impunity KH က ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခွင့်ရခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့သော M2 Mobile Legends World Championship 2020 မှ ယောက်ျားလေးများက မိမိနိုင်ငံတွေကို ကိုယ်စားပြုခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့က ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လက Mobile Legends Southeast Asia Cup (MSC) 2021 မှာလည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကောင်းဆုံးအသင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
CGS Event မှာ ဘယ်လိုပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာသိဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တရားဝင် ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတွေမှာ သေချာစောင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်!
Previous articleFree Fire မှာ မကောင်းဘူးလို့ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ဒီသေနတ်တွေကို မ၀ယ်ခင်မှာ စဥ်းစားပါ
Next articleMLBB ရဲ့ (၅)နှစ်ပြည့် Anniversary မှာ အမှတ်တရတွေဖလှယ်ရင်း Starlight Membership ကံစမ်းကြမယ်! 5️⃣🎉